Zikrii fi Salaata Archives - Page 2 of 2 - Ibsaa Jireenyaa
August 23, 2017 Sammubani One comment
Piroojekti ‘Du’aayi’ jedhu torbaan baay’eef turuu kan danda’u qabachuun har’a waa’ee du’aayi ilaaluuf carraaqna. Dhugumatti du’aayin furtuu milkaa’innaa keessaa tokko. Garuu namoonni baay’een furtuu kanatti fayyadamanii balbala milkaa’innaa fi gammachuu banachuu hin dandeenye. Maaliif banachuu dadhabanii? Sababni isaa maaliidhaa? Akkuma furtuun ilkaan qabu, du’aayinis ilkaan qaba. Ilkaan san sirritti qaranii jiru? Ilkaan sunniin maal akka ta’e sirritti beekani jiru? In sha Allaah gaafile kanaa fi kkf waa’ee du’aa’i ilaalchise walumaan ilaalla. Barreefamni waa’ee du’aa’i ilaalchise asitti barraa’u kitaaba “Du’a The Weapon of the Believer” jedhamu irraa fudhatama. Read more
April 8, 2017 Sammubani 8 comments
“Yaa warra amantan! Qabeenyi keessanii fi ilmaan keessan zikrii Rabbii irraa isin hin dagin. Namoonni kana dalagan isaanumatu hoonga’oota.” Suuratu Al-Munaafiqun 63:9 Read more